ee 2002, Biya ayaa la wareegtay Yves Michel Fotso oo ku yaal Geneva - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA 2002, Biya waxay la wareegtay Yves Michel Fotso oo ku yaal Geneva
ee 2002, Biya waxay la wareegtay Yves Michel Fotso ee Geneva
XIRIIRINTA XIRIIRKA 000 237 698 11 70 14
Wednesday October 02 2002, Benae Mpecke biiray Maamulaha Guud ee Manager Camair telefoonka iyo isaga u sheegay in uu leeyahay ballan maalinta ku xigta ee 15 saacadood wata madaxii kii reer gobolka Hotel Intercontinental ee Geneva halkaas oo uu ku shubo bacaha uu naagtiisa.
Kulanka ka socda Paul Biya iyo Yves Michel Fotso ayaa dhici doona October 03 2002. Yves Michel Fotso waxaa la socda labo Farsamoyaqaannada duulimaadka ee Jet, kuwaas oo horey u soo qaatay 500 000 dollars (Milkiilaha 375 Fcfa) oo ka yimid Gia International oo loogu talagalay gudaha gudaha garoonka diyaaradaha. Kulanku wuxuu bilaabmayaa saacadaha 18 30. Chantal Biya, oo ah xaaska Madaxweynaha Jamhuuriyadda. Labada madaxweyne ayaa dooranaya muraayadaha, dharka, tayada alaabta guriga iyo kuwa kale iyo sidoo kale midabada roogga ee qurxinta gudaha ee BBJII.
TAAGEERADA LEWOURI.INFO adoo samaynaya samaynta
Kadib ku dhowaad saacad iyo badh wadahadal, farsamoyaqaanada duulimaadka Jet oo hawlgabaya iyo Yves Michel Fotso ayaa wareysi la yeelanaya madaxa dawladda. Waxay ahayd markii madaxweynaha Camair uu ku wargeliyay Paul Biya oo go'aanka Atangana Mebara uu ku sii waday inuu sii wado iibinta Boeing 737 BBJII, si toos ah Gobolka Cameroon iyo lacag caddaan ah. Wuxuu sidoo kale muujiyay cabsidiisa ah joojinta heshiiska qandaraaska GIA International si uu ugala xaajoodo wada xaajoodka Boeing. Paul Biya yaab leh: "Halkee ayay qaadan doonaan lacagta si ay u bixiyaan lacagta? ". Fotso isaga u jawaab: " Waxaan maqlay in ay jirto sumad ay soo saartay Shirkadda Batroolka Qaranka ee xaddiga 50 Milyan Dollar "86. Paul Biya wuxuu ku daray: ...... jawaabta buugga.
More halkan PDF, euros 9 https: //www.amazon.fr/Lavion-pr%C3%A9sident-E ... / ... / ref = sr_1_2 ...
Qoraalka BORIS BERTOLT
Ku raaxeyso xogta ka badan 2 2 000 booqdayaasha:
Kordhinta aragtidaada qaranka iyo caalamkaba
Isku day ololehaaga internet-ka, isgaarsiinta ugu weyn
Kaga shaqeyso ganacsigaaga
Ku daabac xayeysiisyadaada ka socda 5 000 FCFA
Contact: 000 237 698 11 70 14 / 672 47 11 29
Waxyaabaha la mid ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/exclusif-en-2002-biya-avait-echange-avec-yves-michel-fotso-a-geneve/
Tunisia: Nidaa Tounes 'shirkii la doorto ayaa waqti dheeri ah ka ciyaaraya - JeuneAfrique.com